Iran: Hetsi-panoherana antserasera nandritra ny tsingerintaona faha-30 nibodoana ny ambasady Amerikana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Janoary 2019 4:07 GMT
Raha nampitandrina ny mpanohitra mba tsy hanao hetsi-panoherana amin'ny 4 Novambra ny Mpiambina Revolisionera Islamika IRGC, miomana amin'ny famoriam-bahoaka goavana manohitra ny didy jadona kosa ny vahoaka Iraniana. Manamarika ny tsingerintaona fibodoana ny ambasady Amerikana ny datin'ny 4 Novambra. 30 taona lasa izay, nibodo ny ambasady ireo mpianatra, saingy ankehitriny dia niova tanteraka ny mpianatra, ka tamin'ity indray mitoraka ity, ho fahatsiarovana izany andro izany, dia te-handefa hafatra milamina ho an'izao tontolo izao izy ireo.
Vokatr'izany, dia nahazo afisy kanto goavana ny aterineto izay maneho ny hevitry ny Iraniana, ankoatra ireo afisy ireo dia mikendry ny handrisika ny olona hiara-hivory sy hanohitra ny jadona sy ny fanavakavahana, ary hijoro ho amin'ny fitoviana sy ny zon'olombelona ireo afisy ireo.
Ankoatra izay, miezaka maneho ny heviny momba ny zava-misy ankehitriny iainan'ny fiarahamonina Iraniana ny ankamaroan'ny bilaogy, ka maro ireo fandraketam-peo navoaka antserasera tamin'ny 4 Novambra. Feno horonantsarimihetsika, sary sy fanamarihana ho fahatsiarovana ireo maty nandritra ny hetsi-panoherana taorian'ny fifidianana ny Facebook sy Youtube.
Mifanohitra amin'izany kosa, dia nampitandrina ny mpanohitra sy ny vahoaka mba tsy hanao hetsika hafa ankoatra izay manohitra an'i Etazonia ihany ireo mpanao politika malaza sy ny IRGC. Mandritra izany fotoana izany, niezaka nanao fanerena tamin'ny fampitam-baovao mahazatra ny governemanta, tahaka ny iray tamin'ireo gazety Iraniana izay voaràra vao haingana noho ny antony tsy mazava.
Nanamarika ny IRGC fa tokony hitandrina ny olona mba tsy hanalavitra ny politikan'ny governemanta. Araka ny voalazan'ny IRGC, voasariky ny governemanta vahiny toa an'i Etazonia sy firenena tandrefana hafa ny mpanohitra. Nandefa fampitandremana tao amin'ny sampam-baovaom-panjakana IRNA ny governemanta Iraniana fa tsy handefitra amin'izay teny filamatra “mampizarazara sy diso”.
Na izany aza, mbola mandrisika ny olona hivoaka sy hijoro ho an'ny zo fototr'izy ireo ny mpitarika ny mpanohitra Mr. Mousavi sy Karobi. Ankoatra izay, maro ireo hetsika avy amin'ny anjerimanontolo sy ny sekoly ambony mihitsy aza mba hanohanana ny hetsika maitso Iraniana. Natomboka indrindra ireo hetsiky ny oniversite taorian'ny iray tamin'ireo mpianatra tao amin'ny Oniversiten'i Sharif nihiaka amin'ny jadona teo anoloan'ny Ayatollah Khamenei nandritra ny fivoriana iray.
Misafotofoto toy ny fihetsiketsehana maro ny tontolo iainana ao anatin'ny sehatra akademika ao Iran toy ny oniversite sy ny sekoly ambaratonga ambony . Ankoatra izay, dia antsoina koa hoe andron'ny mpianatra ny 4 Novambra .
sary lehibe: http://i34.tinypic.com/1g20ys.jpg